कोरोनाको नयाँ लक्षण जिब्रोमा देखियो, यस्ता लक्षण देखिए घरमै बस्न अनुसन्धानकर्ताको सु'झाव -
Homeसमाचारकोरोनाको नयाँ लक्षण जिब्रोमा देखियो, यस्ता लक्षण देखिए घरमै बस्न अनुसन्धानकर्ताको सु’झाव
कोरोनाको नयाँ लक्षण जिब्रोमा देखियो, यस्ता लक्षण देखिए घरमै बस्न अनुसन्धानकर्ताको सु’झाव
January 20, 2021 admin समाचार 2248
कोरोनामा अर्को नयाँ लक्ष’ण देखापरे पछि अनुसन्धानकर्तालाई फेरी हैरानी थपिएको छ । चीनवाट सुरु भएको कोरोनाको प्र’भाव रोक्न खोप निर्माण नहुँदै फेरी अर्को नयाँ प्रकारको कोरोनाले प्रवे’श पाइसकेको छ ।
अहिले कोरोनाको फेरी नयाँ ल’क्षण देखिएको हो । अनुसन्धानकर्ताका अनुसार संक्र’मितको जिब्रोमा दाग र घाउ देखिने नयाँ लक्षण देखिएको हो । जसलाई वैज्ञानिकले कोभिड-टङ नाम दिएका छन्।
यस लक्ष’णको पहिचान गर्नै किङ्स कलेज लन्डनका विशेषज्ञले भनेका छन्, ‘कोरोनाका हरेक ५ बिरामीमध्ये एकमा यस्तो लक्षण देखिएको छ जुन त्यति सा’मान्य छैन। यद्यपि अहिलेसम्म विश्वका ठूला स्वास्थ्य एजेन्सीले आधि’कारिक रूपमा कोभिड-टङ लक्षणको घोषणा गरिसकेका छैनन्।
यस्ता लक्षण देखिएकाहरुलाई अनुसन्धानकर्ताले घरमै बस्न सु’झाव दिएका हुन् । किङ्स कलेजका प्राध्यापक टिम स्पेक्टरले यसबारे सामाजिक सञ्जालमार्फत जा’नकारी दिंदै घरमै बस्न सुझाव दिएका छन्। उनका अनुसार कोरोनाका बिरामीको जि’ब्रोमा घाउ र दाग देखिने समस्या बढिरहेको छ। यदि तपाईंमा यस्ता लक्ष’ण देखिएको छ वा टाउको दुख्ने वा थ’कान महसुस भइरहेको छ भने घरमै बस्नुस् । – इताजा खबरबाट
भाइरल सचिन परियार र रबिना बसेलको दोस्रो गीत रातो रबर एक घण्टामै भाइरल(भिडियो हेर्नुहोस्)
प्रेम गरेर विवाह गरेकी श्रीमतीले छो’डेर गएपछि, श्रीमान मिडियामा(भिडियो सहित)
February 24, 2021 admin समाचार 1346
श्रीमती माड’वारीको घरमा काम गर्ने गर्थिन । श्रीमानलाई पनि चासो लाग्यो कस्तो घरमा काम गर्ने रहे’छन् श्रीमतीले ? त्यसपछि उनले आफु पनि हेर्न जान खोजे । यहि कुरामा उनीहरुको स’म्बन्ध वि’ग्रियो । प्रेम गरेर विवाह
January 12, 2021 admin समाचार 2650
नुवाकोटमा भयो अचम्म, २८ वर्षीया सोमिका तामाङले एकै साथ जन्माइन् पाँच शिशु
October 5, 2020 admin समाचार 5493
थापा’थलीस्थित परोप’कार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्प’तालमा नुवा’कोटकी २८ वर्षीया सोमि’का तामाङले एकै साथ पाँच शिशु जन्माएकी छन् । उनले आज अस्पता’लमा शल्य’क्रियामार्फत पाँच शिशुलाई जन्माएकी अस्पताल’का निर्देशक डा सङ्गीता’कौशल मिश्रले जान’कारी दिए । तीमध्ये एक
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (165357)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनुहुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (164802)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (164800)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (162329)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (161921)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (160382)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (155265)
श्रीमान विदेशमा दिनरात दुःख गर्दै, यता श्रीमती आफ्नै श्रीमानको साथीसंग भागेपछि, सबैलाई रुवाउने कथा (145417)